कास्की २ को उपनिर्वाचनमा स्व*र्गीय रविन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई उठ्ने ! – ईमेची डटकम
लामो समय चर्चा परिचर्चापछि अन्ततः स्व*र्गीय रबिन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई नै कास्की २ को उपनिर्वाचनमा नेकपाको उ*म्मेदवार हुने लगभग नि*श्चित भएको छ । आगामी मंसिर १४ गते कास्कीको क्षेत्र नं. २ मा हुने देशकै एकमात्र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाबाट रविन्द्रपत्नी विद्या नै उम्मेदवार हुने टुंगो लागेको नेकपा श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार नेकपाको बैठकमा सोमबार अधिकांश नेताहरुले विद्यालाई नै उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
तस्विर : विद्या भट्टराईको फेसबुकबाट लिइएको ।